မြမြ ဝိညာဉ်ဝင်ပူးခံရသည့် မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ ပြောပြီ…. - CeleLove
မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ ပြောပြီ
ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်များကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် ….။
“ညီမကိုလည်း လုပ်ကြံပြီးလုပ်တယ်ပြောတယ်၊ ညီမကိုယ်ချင်းစားလို့ ကူညီတာပါ၊ ညီမကို ရူးတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်၊ အခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရှိတယ်ပြောလို့လာတာပါ၊မြမြဆိုတာကို ညီမလည်း မသိပါဘူး ….။
ဦးနှောက်ထဲမှလည်း မရှိပါဘူး၊ ဝင်ပူးခံရပြီးနောက် ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်ကြည်တော့မှသိတာပါ။” ဟု ယင်းစက်ရုံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ပထမဆုံးဝင်ပူးခံရသည် စက်ရုံအလုပ်သမား မဇာခြည်လွင်ကပြောပါတယ် ….။
“ကျွန်မကို ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပေးတာပါ၊ ညီမတို့က အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပေးမယ့် ငွေအင်အားမရှိဘူး၊ လူအင်အားမရှိဘူး၊ ဒီသတင်းစာရှင်းပွဲလုပ်တာလည်း ညီမတို့ကို ဖိတ်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူး၊
ညီမတို့က ညီမတို့လိမ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို လာရှင်းတာ…သူတို့ပြောသွားတဲ့စကားကလည်း ညီမတို့က သက်သက်မယ့်လုပ်ကြံတယ်ဆိုပြီးပြောတာ၊ အခု လိုင်းပေါ်မှာအဆဲခံနေရတာအများကြီး၊ ညီမတို့ဘက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး။
ဒီစက်ရုံမှ မြမြ ရှိလားမရှိလာဆိုတာလည်း ညီမတို့မသိဘူး၊ ညီမတို့လည်း ဂုဏ်သိက္ခာကျပါတယ်။ညီမတို့ပြောတဲ့စကားတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး”.ဟု ဒုတိယမြောက် ဝိညာဉ်ဝင်ပူးခံရသည့် ယင်းစက်ရုံမှအလုပ်သမား မဝေဇင်ထွန်းကအခုလိုပဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ် …။
မွမွ ဝိညာဉျဝငျပူးခံရသညျ့ မဇာခွညျလှငျ နဲ့ မဝဇေငျထှနျး တို့ ပွောပွီ….
မွမွဝငျပူးခံရသူ မဇာခွညျလှငျ နဲ့ မဝဇေငျထှနျး တို့ ပွောပွီ
ဒီနပွေု့လုပျတဲ့ ကြောကျစိမျးစကျရုံတာဝနျရှိသူမြား သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ မှာ မွမွဝငျပူးခံရသူ မဇာခွညျလှငျ နဲ့ မဝဇေငျထှနျး တို့ရဲ့ ပွောကွားခကျြမြားကို ထုတျနှုတျဖျောပွလိုကျပါတယျနျော ….။
“ညီမကိုလညျး လုပျကွံပွီးလုပျတယျပွောတယျ၊ ညီမကိုယျခငျြးစားလို့ ကူညီတာပါ၊ ညီမကို ရူးတယျလို့လညျးပွောကွတယျ၊ အခုသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲရှိတယျပွောလို့လာတာပါ၊မွမွဆိုတာကို ညီမလညျး မသိပါဘူး ….။
ဦးနှောကျထဲမှလညျး မရှိပါဘူး၊ ဝငျပူးခံရပွီးနောကျ ဗီဒီယိုဖိုငျပွနျကွညျတော့မှသိတာပါ။” ဟု ယငျးစကျရုံတှငျအလုပျလုပျကိုငျပွီး ပထမဆုံးဝငျပူးခံရသညျ စကျရုံအလုပျသမား မဇာခွညျလှငျကပွောပါတယျ ….။
“ကြှနျမကို ဘုနျးကွီးကိုယျတိုငျကထုတျပေးတာပါ၊ ညီမတို့က အမှနျတရားကို ဖျောထုတျပေးမယျ့ ငှအေငျအားမရှိဘူး၊ လူအငျအားမရှိဘူး၊ ဒီသတငျးစာရှငျးပှဲလုပျတာလညျး ညီမတို့ကို ဖိတျခွငျးလညျးမရှိပါဘူး၊
ညီမတို့က ညီမတို့လိမျတာမဟုတျဘူးဆိုတာကို လာရှငျးတာ…သူတို့ပွောသှားတဲ့စကားကလညျး ညီမတို့က သကျသကျမယျ့လုပျကွံတယျဆိုပွီးပွောတာ၊ အခု လိုငျးပျေါမှာအဆဲခံနရေတာအမြားကွီး၊ ညီမတို့ဘကျမှာ ဘယျသူမှမရှိဘူး။
ဒီစကျရုံမှ မွမွ ရှိလားမရှိလာဆိုတာလညျး ညီမတို့မသိဘူး၊ ညီမတို့လညျး ဂုဏျသိက်ခာကပြါတယျ။ညီမတို့ပွောတဲ့စကားတှလေညျး မဟုတျပါဘူး”.ဟု ဒုတိယမွောကျ ဝိညာဉျဝငျပူးခံရသညျ့ ယငျးစကျရုံမှအလုပျသမား မဝဇေငျထှနျးကအခုလိုပဲ ပွောပွခဲ့ပါတယျ …။